रुपन्देहीको सैनामैनामा शहरी खानेपानी तथा सरफाई आयोजनाको काम हुने
रेडियो टाइम्स मंगलबार, असोज २७, २०७७, १७:००:००
नरेश चौधरी, सैनामैना, असोज २७ ।
रुपन्देहीको सैनामैनामा शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको काम हुने भएको छ । बस्ती विकास संगै खानेपानीको माग पुरा गर्न तथा सरसफाईलाई मध्यनजर गर्दै सो काम गरिन लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कार्यक्रम एसियाली विकास बैंक (ए.डि.वि.) को सहयोगमा संचालन गर्न लागिएको हो ।
हाल नगरपाकिाको ५,६,७,८र९ वडाहरुमा पानी पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । आवश्यकता अनुसार अन्य वडाहरुमा पनि पानी पुर्‍याईने सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले बताउनु भयो । तदर्थ समिती गठन, डिपिआर तयार गरे पश्चात आयोजनाको काम अगाडी बढ्ने उहाँका भनाई छ । उहाँले भन्नु भयो –“डिपिआरको काम हप्ता–दश दिन भित्र सुरु हुन्छ । ” आयोजना सुरु गर्नका लागि तथा कार्यान्वयनका लागि निर्माण कम्पनी, खानेपानी तथा ढल व्यवस्था विभाग, नगर विकास कोष, नगरपालिका, उपभोक्ता समिति, स्थानीय राजनितिक दल, संघ संस्था, समाज सेविहरुसंग छलफल तथा सहकार्य गरि काम अघि बढाईने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो–“आयोजना सम्पन्नका लागि करोडौ तथा अर्वाै लाग्न सक्ने छ ।” आयोजना सम्झौताको सर्तअनुसार कूल योजनाको पाँच प्रतिशत उपभोक्तले, २५ प्रतिशत नगरपालिकाले बेहाेर्ने छ भने ७० प्रतिशत एसियाली विकास बैंकको अनुदान रहने छ । यस योजनाले नगरको खानेपानी समस्या, वैज्ञानिक ढल निकास, सरसफाईमा सहयोग पुग्ने र नगरपालिकाले सैनामैनाको वडा नं. ८ मा निर्माण गर्ने एकिकृत शहरी विकासको कार्यलाई मद्दत पुग्ने उहाँको भनाई छ ।
आयोजनाअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित खानेपानी योजनामध्ये याे बृहत् खानेपानी सबैभन्दा ठुलो मध्यको योजना मानिएको छ । बहुवर्षे योजना अन्तरगत सो काम गरिने छ ।
यसैविच सैनामैना नगरपालिकाले मंगलबार शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका विषयमा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । अन्तरकृया कार्यक्रममा सैनामैना नगरपालिकामा रहेका विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि, समाजसेवि लगाएत संग छलफल गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेकपाको तर्फबाट खुसिराम चौधरी, चेतनारायण न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रामप्रसाद अधिकारी, खाडनन्द खनाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट गणेश गौतम, टाम बहादुर सोमै राष्ट्रिय जनमुक्ति, एकदेव पौडेल क्रान्तिकारी माओवादी, दुर्गा खनाल रा.प्र.पा, समाजसेवि खिम बहादुर थापा लगाएतले आयोजनाकाे आवश्यकता र महत्त्वका विषयमा बोलेका थिए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २७, २०७७, १७:००:००
नेपालसहित ६ मुलुकलाई दुई करोड डोज कोरोना खोप दिने भारतको योजना’ मंगलबार, असोज २७, २०७७, १७:००:००
बाँकेमा कोरोना संक्रमित एक महिलाको मृत्यु मंगलबार, असोज २७, २०७७, १७:००:००
परम्परागत पेशाको संरक्षण गर्दै सैनामैना, आरन चलाउने समुदायलाई आधुनिक उपकरण मंगलबार, असोज २७, २०७७, १७:००:००
​ अमेरिकी तल्लो सदनबाट ट्रम्पलाई हटाउने प्रस्ताव पारित मंगलबार, असोज २७, २०७७, १७:००:००